सगरमाथामा मृत्यु ट्राफिक चापले मात्रै भएको होइनः पर्यटन विभाग «
सगरमाथामा मृत्यु ट्राफिक चापले मात्रै भएको होइनः पर्यटन विभाग
प्रकाशित मिति : १२ जेष्ठ २०७६, आईतवार ११:४८
काठमाडौं । पर्यटन विभागले सगरमाथा लगायत क्षेत्रमा परी निधन भएका आरोहीको मृत्युको कारण केवल ट्राफिक चाप मात्र नरहेको स्पष्ट पारेको छ । आइतबार विज्ञप्ती जारी गर्दै विभागले हिमालमा अनेक प्रतिकूलताका कारण मानिसको निधन हुने भन्दै केवल ट्राफिक चापका कारण निधन भन्ने आषयको प्रचारले सगरमाथाको महत्व र गरिमा होच्याउने काम गरेको उललेख गरेको छ ।
आरोहीको मृत्युको कारण वैज्ञानिक पद्धतिबाट मात्र पहिचान गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । विभागका अनुसार बसन्त ऋतुमा ३२ हिमालका लागि ११६ आरोहण अनुमतिमार्फत ८९५ जनालाई हिमाल आरोहणको अनुमति थियो ।
यस सिजनमा मात्र हिमाल आरोहणमा जाने र र्फकने क्रममा १६ जनाको मृत्यु भइसकेको छ । सगरमाथामा मात्र ८ जनाको निधन भएको छ ।
किन भयो सगरमाथामा चाप ?
विभागका अनुसार १४ मे २०१९ मा डोरी टाग्ने काम पुरा भएको थियो । त्यसपछि १६ मेसम्म मौसम अनुकूल थियो । त्यसो समयमा थोरै मात्र आरोही माथि पुग्न सके । त्यसपछि २१ मेसम्म मौसम प्रतिकूल भयो ।
एक जना आरोही पनि चुचुरोसम्म पुग्न सकेनन् । त्यसपछि २१ मेबाट पुनः मौसम अनुकूल हुन थाल्यो । २१ मेमा चुचुरो पुग्ने योजना बनाएका अधिंकाश आरोही दू्रत हावाका कारण चौथो शिविरमा दुई रात बस्न बाध्य भए ।
त्यसकारण २२ र २३ मे का दिन चौथो शिविरदेखि माथि आरोहीको भीड लागेको विभागका स्पष्ट पारेको छ । (श्रोत : अनलाईनखबर )
यो पनि पढ्नुस …! सगरमाथाको चुचुरोमा हस्तमैथुन गर्नेलाई कारबाही गर सरकार ?